” ဘိုင်ယန်မြူးနစ် အသင်းမှ ပြင်သစ်ကြယ်ပွင့် ကွင်းလယ် ကစားသမား ကိုးမန်းကို လာမယ့် ရက် ပိုင်း အတွင်းမှာ မြင့်မားတဲ့ပြောင်းရွေ့ ကြေးနဲ့ ခေါ်ယူနိုင်တော့မယ့် ယူနိုက်တက် “ – Sport Gaber
” ဘိုင်ယန်မြူးနစ် အသင်းမှ ပြင်သစ်ကြယ်ပွင့် ကွင်းလယ် ကစားသမား ကိုးမန်းကို လာမယ့် ရက် ပိုင်း အတွင်းမှာ မြင့်မားတဲ့ပြောင်းရွေ့ ကြေးနဲ့ ခေါ်ယူနိုင်တော့မယ့် ယူနိုက်တက် “
ပရီးမီးယားလိဂ္ အင္အားျကီး အသင္း ( 1 ) သင္း ျဖစ္တဲ့ ယူနိုက္တက္ အသင္းသည္ ဘိုင္ယန္ျမူးနစ္အသင္းတြင္ ေတာက္ပေနတဲ့ ေတာင္ပံတိုက္စစ္ ကစားသမား ျပင္သစ္ျကယ္ပြင့္ ကြင္းလယ္ ကစားသမား ကိုးမန္းကို လာမယ့္ ရက္ ပိုင္း အတြင္းမွာ ျမင့္မားတဲ့ေျပာင္းေရြ့ ေၾကးနဲ႔ ေခၚယူနိုင္ေတာ့ မွာ ျဖစ္တယ္လို့ ဂ်ာမဏီ နာမည္ျကီး သတင္းစာေစာင္ေတြမွာ ေဖာ္ျပေနတာ ေတြ့ရဘာတယ္ ။
ယူနိုက္တက္အသင္း သည္ ျပင္သစ္ျကယ္ပြင့္ ကြင္းလယ္ ကစားသမား ကိုးမန္း ကို ေခၚယူဘို့. အရင္ႏွစ္ေတြကတည္းကစိတ္ဝင္စားခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ျပင္သစ္ျကယ္ပြင့္ ကြင္းလယ္ ကစားသမား ကိုးမန္း သည္ ဘိုင္ယန္ျမူး နစ္အသင္းမွာ သူရေနတဲ့လစာေငြက နည္းပါးေနတဲ့အေပၚ မေက်မနပ္ျဖစ္ေနတယ္လို႔ သတင္းထြက္ေနပါတယ္။
အသက္( 24 ) ႏွစ္အရြယ္သာ ရွိေသးတဲ့ ျပင္သစ္ျကယ္ပြင့္ ကြင္းလယ္ ကစားသမား ကိုးမန္း သည္ ဘိုင္ယန္ျမူးနစ္အသင္းမွာ ( 1 )ႏွစ္ကို 12 သန္းရရွိေနေပမယ့္အခြန္ႏႈတ္ၿပီးသြားရင္ေတာ့ အဲဒီပမာဏထက္ နည္းပါးသြားတာျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒါေၾကာင့္ ယူနိုက္တက္အသင္း သည္ ျပင္သစ္ျကယ္ပြင့္ ကြင္းလယ္ ကစားသမား ကိုးမန္း ကို ျမင့္မားတဲ့လစာေငြနဲ႔ကမ္းလွမ္းသြားဖို႔စီစဥ္ေနၿပီး ဘိုင္ယန္ျမူးနစ္အသင္းကေတာ့ သူတို႔ရဲ့အဓိကကစားသမား ( 1 ) ေယာက္ ကို လြယ္လြယ္နဲ႔လက္လႊတ္ခံမယ့္အေနအထားမရွိပါဘူး။
ျပင္သစ္ျကယ္ပြင့္ ကြင္းလယ္ ကစားသမား ကိုးမန္း သည္ 2015 ခုႏွစ္တုန္းက ဂ်ုဗင္တပ္ အသင္းကေန ဘိုင္ယန္ျမူးနစ္အသင္းဆီအငွားနဲ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ၿပီး ေျခစြမ္းျပကစားနိုင္တာေၾကာင့္ 2017 ခုႏွစ္မွာဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းက သူ႔ကိုအၿပီးသတ္ေခၚယူခဲ့ပါတယ္။
ဘိုင္ယန္ျမူးနစ္ ကစားသမားဘ၀ (6) ႏွစ္တာကာလအတြင္း ဘြန္ဒစ္လီဂါ (6) ႀကိမ္၊ခ်န္ပီယံလိဂ္အပါအဝင္ အဓိက ဆုဖလားေတြအမ်ားႀကီး ရယူနိုင္ခဲ့တဲ့ ျပင္သစ္ျကယ္ပြင့္ ကြင္းလယ္ ကစားသမား ကိုးမန္း သည္ ဘိုင္ယန္ျမူးနစ္အသင္းနဲ႔ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္အထိစာခ်ဳပ္သက္တမ္းက်န္ရွိေနသူလည္းျဖစ္ပါတယ္။
ပရီးမီးယားလိဂ် အင်အားကြီး အသင်း ( 1 ) သင်း ဖြစ်တဲ့ ယူနိုက်တက် အသင်းသည် ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းတွင် တောက်ပနေတဲ့ တောင်ပံတိုက်စစ် ကစားသမား ပြင်သစ်ကြယ်ပွင့် ကွင်းလယ် ကစားသမား ကိုးမန်းကို လာမယ့် ရက် ပိုင်း အတွင်းမှာ မြင့်မားတဲ့ပြောင်းရွေ့ ကြေးနဲ့ ခေါ်ယူနိုင်တော့ မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဂျာမဏီ နာမည်ကြီး သတင်းစာစောင်တွေမှာ ဖော်ပြနေတာ တွေ့ရဘာတယ် ။
ယူနိုက်တက်အသင်း သည် ပြင်သစ်ကြယ်ပွင့် ကွင်းလယ် ကစားသမား ကိုးမန်း ကို ခေါ်ယူဘို့. အရင်နှစ်တွေကတည်းကစိတ်ဝင်စားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပြင်သစ်ကြယ်ပွင့် ကွင်းလယ် ကစားသမား ကိုးမန်း သည် ဘိုင်ယန်မြူး နစ်အသင်းမှာ သူရနေတဲ့လစာငွေက နည်းပါးနေတဲ့အပေါ် မကျေမနပ်ဖြစ်နေတယ်လို့ သတင်းထွက်နေပါတယ်။
အသက်( 24 ) နှစ်အရွယ်သာ ရှိသေးတဲ့ ပြင်သစ်ကြယ်ပွင့် ကွင်းလယ် ကစားသမား ကိုးမန်း သည် ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းမှာ ( 1 )နှစ်ကို 12 သန်းရရှိနေပေမယ့်အခွန်နှုတ်ပြီးသွားရင်တော့ အဲဒီပမာဏထက် နည်းပါးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် ယူနိုက်တက်အသင်း သည် ပြင်သစ်ကြယ်ပွင့် ကွင်းလယ် ကစားသမား ကိုးမန်း ကို မြင့်မားတဲ့လစာငွေနဲ့ကမ်းလှမ်းသွားဖို့စီစဉ်နေပြီး ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းကတော့ သူတို့ရဲ့အဓိကကစားသမား ( 1 ) ယောက် ကို လွယ်လွယ်နဲ့လက်လွှတ်ခံမယ့်အနေအထားမရှိပါဘူး။
ပြင်သစ်ကြယ်ပွင့် ကွင်းလယ် ကစားသမား ကိုးမန်း သည် 2015 ခုနှစ်တုန်းက ဂျုဗင်တပ် အသင်းကနေ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းဆီအငှားနဲ့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး ခြေစွမ်းပြကစားနိုင်တာကြောင့် 2017 ခုနှစ်မှာဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းက သူ့ကိုအပြီးသတ်ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။
ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ကစားသမားဘဝ (6) နှစ်တာကာလအတွင်း ဘွန်ဒစ်လီဂါ (6) ကြိမ်၊ချန်ပီယံလိဂ်အပါအဝင် အဓိက ဆုဖလားတွေအများကြီး ရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ ပြင်သစ်ကြယ်ပွင့် ကွင်းလယ် ကစားသမား ကိုးမန်း သည် ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းနဲ့ ၂၀၂၃ ခုနှစ်အထိစာချုပ်သက်တမ်းကျန်ရှိနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ခ ရက္ ဒစ္
ကျွန်တော်နဲ့ ကျနော်မိသားစု အတွက် အလွန်ဂုဏ်ယူစရာ အချိန်လေးပါလို့ ပြောပြလာတဲ့ မက်ဘရီ
ယူနိုက်တက်ခံစစ်မှာ မက်ဂွိုင်းယားမရှိရင် မဖြစ်တာကို အချက်အလက်တွေက သက်သေပြနေ